Turkiga oo qashinka ku daray eedeyn la xiriirta Soomaaliya oo loo jeediyey
ANKARA, Turkey – Turkiga ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha ku saabsan in uu codsaday ciidamo Soomaali ah si uu uga qeybgeliyo ololihiisa uu ku caawinayo dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Libya.
Mehmet Yılmaz, danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya oo u waramay wakaaladda wararka Anadolu Agency, ayaa rumeysan in ciidamadda waddankiisa ay ku filan yihiin dagaalka ka dhanka ah Khaliifa Xaftaar.
"Baraha bulshadda waa mid aad ugu xoog badan gudaha Soomaaliya. Waxaan wadamada aan joogno ku caawinaa danahooda. Waxaana aragnaa in tani lagu beegsanayo dedaalkaas. Eedeymahaas ma ahan run. Ma jirto wax run ah oo qayb ka ah sheegashooyinkaas," ayuu carabka ku adkeeyay.
Jawaabta Turkiga ayaa kusoo hagaageysa xilli dowladda Soomaaliya ay bilooyinkii lasoo dhaafay wajaheysay cadaadis ku aadan in ay meel ku sheegto dhalinyaro ay tababar ugu dirta dibada.
Diblumaasiga oo sii hadlaya ayaa difaacay joogitaanka ciidan iyo midka siyaasadeed ee dowladiisu ku leedahay Soomaaliya, isagoo tibaaxay in ay ahmiyad balaaran u leedahay la dagaalanka kooxaha argagixisadda.
Bixitaanka ciidamadda AMISOM ee la qorsheynayo in ay waddanka ka hayaamaan dhamaadka sanadka dambe ayuu ka dhawaajiyey in ay fursad u noqoneyso dhismaha ciidamo Soomaaliyeed oo amniga dalkooda suga.
Turkiga ayuu ku sifeeyay "waddanka ugu tayadda wanaagsan" dhamaan dowladaha kale ee caawimaadka la garab-taagan Soomaaliya.
Sidda laga soo xigtay Yılmaz, Turkiga ayaa doonaya in uu tababaro saddex meelmood hal dalool oo kamid ah ciidamadda Soomaaliya.
Sikastaba ha ahaatee, Turkiga ayaa magaalada madaxda Muqdisho wuxuu ku leeyahay saldhiga milatari ee ugu baaxadda weyn meel ka baxsan dalkiisa uu ka dhistay, waxaana lagu tababaraa ciidamadda kumaandooska.
Xilligii uu dalka ka maqnaa Farmaajo waxaa xabsiga la dhigay dhowr mas'uul oo...
Soomaaliya iyo Turkiga oo is-weedaarsaday dhulka safaraadaha
Soomaliya 23.03.2019. 05:32
Soomaliya 09.08.2020. 10:20